फिल्म व्यापारको दु:खद सुरुवात – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ जेष्ठ ३० गते बुधबार १५:४४ मा प्रकाशित
बिपिन कार्कीको अभिनयबाट प्रभावित नहुने कमै होलान् । उनको फिल्म हेर्नेहरु अधिकांश अभिनयको खुलेरै तारिफ गर्छन् । छड्के, पशुपतिप्रसाद, जात्रा, नाका जस्ता फिल्ममा उनलाई दर्शकले मन पराए ।
तर, अघिल्लो साता रिलिज भएको फिल्म ‘हरि’ यि सबैको अपवाद बन्यो । फिल्म चलेन । पोखराको बिन्दवासिनी चलचित्र मन्दिरमा शनिवारको बिहानी शोमा पनि व्यापार हजार कटेन । मध्यान्न १२ बजे फिल्मले शो पाएन ।
एक फिल्मको प्रचारमा विपिनले मलाई भनेका थिए , ‘मैले खेलेको अहिले सम्मको उत्कृष्ट फिल्म आउँदैछ हरि । मैले निकै मिहेनत गरेको छु,’ त्यसो त आम दर्शक भन्दा पनि समीक्षकहरुले बिपिनको तारिफ त गरे, तर व्यवसायिक नतिजा कहालिलाग्दो आयो ।
‘एक महिनालाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाली फिल्मको व्यापार एकदम नराम्रो छ,’ पोखरा सिनेप्लाजाका सञ्चालक उत्तम द्धा भन्छन् ‘यो बर्ष नै रिलिज भएका नेपाली फिल्मको व्यापार बिर्सन लायक छ । ’
बर्ष २०७५ को दोस्रो महिनाको मध्यसम्म आइपुग्दा नेपाली फिल्मको व्यापार सुखद रहेन । हल्ला र चर्चाका लागि जे जति व्यापार भनिएपनि यथार्थमा फिल्म चलेको पाइएन् । राम्रा भनिएका फिल्मबाट दर्शक निराश भए । ‘डमरुको डण्डिवियो , कोहलपुर एक्सप्रेस , सनुकेशरी अनि हरि’ त्यसैको उदाहरण बने ।
वर्षको सुरुवातका एक हप्ता अघिल्ला बर्षका फिल्मले राम्रै व्यापार गरे । त्यसयता कुनै पनि फिल्मले न त दर्शकको मन जिते न त लगानी नै उठाए । यो हप्ता सम्म निराश भनेको नेपाली फिल्म क्षेत्र तत्कालै उत्साहजनक रुपमा अघि बढ्ने आँकलन गर्न मुस्किल छ ।
यसबर्ष ‘छक्का पन्जा ३, क्याप्टेन, ए मेरो हजुर ३, मालिका, इन्टु मिन्ट लण्डनमा, कायरा’ जस्ता फिल्महरुले राम्रो व्यापार गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त फिल्मको व्यापारबारे पुर्वनुमान लगाउन सकिदैन ।
यद्यपि चलेका भनेका अनुहारले अभिनय गरेका यि फिल्म बर्षको प्रतिक्षित फिल्म भने हुुन् । यि बाहेक ‘बोबी, रोजी, दि कर्मा, रणविर, नाइ नभन्नु ल ५, जात्रै जात्रा’ पनि प्रतिक्षित भित्रै पर्छन् । बर्षेनि फिल्म निर्माणको क्रम बढ्दै जाँदा व्यापार र फिल्मको कथामा सुधार भने देखिएन ।
नेपाली फिल्मको छांयाकनसँगै प्रर्दशन समेत बिदेशमा गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । केहि फिल्मकर्मीले नेपाली फिल्मको बजार बिदेश सम्म पु¥याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘हामीले मनाङ मुस्ताङ सम्म पुगेर फिल्म छायाँकन गर्छौं, त्यहाँ पुग्दा जति खर्च लाग्छ लगभग त्यति नै बराबर नेपाल बाहिर छायाँकन गर्दा हुन्छ’ निर्देशक मिलन चाम्सले भने, ‘फिल्मको व्यापार भन्दा पनि नेपाली फिल्मको बजारलाई बिस्तारमा लागी परेको छु । फिल्मबाट राम्रो कमाइ हुने दिन कुरिरहेको छु ।’
स्वदेश बाहिर फिल्म छायांकन गर्दा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको माया, सद्भाव राम्रो पाइने उनले अनुभव साटे । गत बर्ष २०७४ मा पनि हातमा गन्न सकिने चलचित्र चले । यसबर्ष पनि चर्चित अनुहारहरुलाई प्रतीक्षा गरिरहँदा फिल्मको व्यापार धुरमुरको अवस्था छ ।
बक्स अफिसले जगाएको आशा
बक्स अफिस मुद्धा पुरानै हो । मल्टिप्लेक्सको बिकासक्रमसँगै उठकोे यो मुद्धाले आज सम्म पूर्णता पाएन । खासगरि निर्माता÷निर्देशकहरु बक्स अफिसको नारालाई जोड तोडका साथ उठाउँदै आइरहेका छन् ।
चलचित्र बिकास बोर्डको नेतृत्व निकिता पौडेलले सम्हाले पश्चात उनले यसका लागी केहि सकरात्मक प्रयास गरिन् । यसले हौसिएका फिल्मकर्मीहरु नेपाल सरकारको आव ०७५/७६ मा समेत बक्स अफिस लागु गर्ने भनेर सम्बोधन गरेपछि अब भने साच्चिकै बक्स अफिस लागु हुनेमा आशावादी छन् ।
२०६६/६७ साल देखि निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्धाले यस बर्ष सफलता पाउँदैछ निर्माता आकाश अधिकारी फेसबुकमा लेख्छन् ‘सिनेमा मनोरन्जनका साथै व्यापार पनि हो, व्यापार पारदर्शिताका लागी बक्स अफिस अनिवार्य हो । २०७० सालमा बक्स अफिस लागु गर्न सकेको भए आज चलचित्र क्षेत्रले ठूलो फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो जे होस् आफूले उठाएको बक्स अफिस प्रणाली लागु हुदैछ । म अति नै खुशि छु चलचित्र क्षेत्र पनि पक्कै खुशी छ ।’
निर्देशक शोभित बस्नेतले बक्स अफिस प्रयोगमा नआएसम्म अझैपनि शंका रहेको तर्क गर्छन् । ‘लागु हुँदैछ ठिक हो तर हलवालाहरुले कहिलेबाट सुरु गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो’ उनले भने ।
आगमी साउन १ गते देखि काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै हलहरुमा बक्स अफिस लागु हुदैछ । परिक्षणका रुपमा काठमाडौंका केही हलहरुमा सुरु भैसकेको छ । तर चलचित्रकर्मी भने यसको सफल कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् ।
‘बजेटमा समेत समेटिएकाले सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नेमा आशावादी छौं‘ बक्स अफिस कार्यान्वयन समितीका संयोजक नरेन्द्र महर्जन भन्छन् ‘साउन १ गते देखि काठमाडौंमा लागु भएसँगै मोफसलका लागि गृहकार्य सुरु गर्छौ’ । माघ १ गतेदेखि मोफसलमा लागु गर्ने योजनामा छौं ।’
अहिले फिल्मको व्यापार यति नै भयो भनेर न त हलवाट वाहिरिन्छ न त निर्माताबाट । निर्माताले सञ्चारमाध्यमलाई जति भन्छन् त्यति नै व्यापार भयो भनेर भन्नपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य बक्स अफिसले नै गर्छ ।
बास्तविक कमाइ कति भयो ? कुन हलमा कति टिकट बिक्री ? भयो भनेर सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । यसले अहिले हलवालाले बोलेको बोली र निर्माताले देखाइरहेको तथ्यांकलाई दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउँछ ।
नेपालमा हाल १ सय ८३ वटा हल सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय निर्माण भएका मल्टिप्लेक्सहरुले ‘ई–टिकेटिङ’ को व्यवस्था गरेका छन् भने अन्य हलहरुमा व्यवस्था सुचारु गरिएको छैन् ।
बक्स अफिस लागु भएका साना हलहरुलाई आर्थिक भार पर्ने पोखरा सिनेप्लाजामा सञ्चालक उत्तम द्धा बताउँछन् । ‘निकै खर्च लाग्छ, सानाहलहरुलाई आर्थिक रुपमा कठिन भएकै कारण बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीसंग देउवाका प्रश्नै प्रश्नःअक्सिजन नपाएर जनता मर्दा सरकार…